Home > News > Company က သင့်အတွက် သင့်တော်ခြင်း ရှိ-မရှိ အမြန)
သင်ဟာ အလုပ်တစ်ခုလိုက်ရှာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင် ဖြစ်လာနိုင်သူရဲ့ သင့်အပေါ်ထင်မြင်ချက်ကို အလွယ်တကူ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာပါးနပ်ချက်ချာရဲ့လား။ သင့်မှာ လိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ ရှိရဲ့လား။ ကုမ္ပဏီမှအဖွဲ့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ သင်ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးနိုင်မှာလား။ သင့်ဘာသာသင် ဒီလိုမေးခွန်းတွေထုတ်ရာမှာ အလုပ်ရှာဖွေမှုဟာ နှစ်လမ်းသွားဖြစ်ကြောင်း လွယ်လွယ်တွေးလို့ရပါတယ်။ သင်ကြိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကို ရှာတွေ့ဖို့အရေးကြီးသလို သင့်ကိုကြိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီရှိဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကံကောင်းရင်တော့ ၀န်ထမ်းခန့်ထားရေးမန်နေဂျာတွေက အလုပ်လျှောက်လွှာ စိစစ်လက်ခံရာမှာ သူတို့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ သင့်ကို သဲလွန်စတွေပေးပါတယ်။ သင်ဘာကိုရှာရမလဲဆိုတာ သိထားရင် အဲဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးချပြီး ဒီအလုပ်နဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သင့်အတွက် သင့်တော်မှုရှိ-မရှိ သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အလုပ်တစ်ခုဟာ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဟုတ်-မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ဖို့ နည်းလမ်းငါးမျိုးကို အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အလုပ်အကြောင်း သရုပ်ဖော်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
အလုပ်အကြောင်းသရုပ်ဖော်ချက်ဟာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ သင့်ရဲ့ ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှု ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းက သင့်အာရုံကို ဖမ်းစားလိုက်ရင် ဘာကြောင့်သူတို့ဆီမှာ သင်အလုပ်လုပ်ချင်ရသလဲဆိုတာ သိရဖို့ အခွင့်အရေးပါပဲ။ အလုပ်အကိုင်သရုပ်ဖော်ချက်ကို နောက်တစ်ခါသင်ဖတ်တဲ့အခါ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပါ။ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက သင့်မှာရှိစေချင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ အရည်အချင်းတွေကို စာရင်းအရှည်ကြီး ချပြလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားတတ်လွန်းတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကတော့ ဒီနေရာမှာ ပညာသည်ဆန်ဆန် တိုးတက်ခွင့်တွေ၊ သူတို့ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ လက္ခဏာသွင်ပြင်တွေနဲ့ သူတို့ပေးမယ့်အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ အခွင့်ထူးတချို့ကို မျှဝေပေးပါတယ်။ အဲဒီ စာပိုဒ်တိုတိုလေးတချို့ကို ပိုမိုစဉ်းစားချင့်ချိန်မှု ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီက သူ့အမှုထမ်းတွေကို တန်ဖိုးထားကြောင်း ပြသပါတယ်။ အဲဒါ ပထမစစချင်းရရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး သတင်းအချက်အလက်ပါပဲ။
၂။ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုဟန်ကို အာရုံစိုက်ပါ။
သင်အလုပ်လျှောက်လွှာတင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ၀န်ထမ်းသစ်ရှာဖွေစည်းရုံးသူ၊ ဒါမှမဟုတ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနက တစ်စုံတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် သင့်မန်နေဂျာဖြစ်လာဖွယ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်မှု စက်ဝန်းက စတင်လည်ပတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့ပဲ သင်ဆက်သွယ်သည်ဖြစ်စေ အာရုံစိုက်ရမယ့်ကိစ္စတချို့ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ဆီက သတင်းကြားရဖို့ သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်ရမှာလဲ။ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းလိုမျိုး လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ သော့ချက်ကျတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေရင် အကျိုးအကြောင်းဆီလျော်တဲ့ အချိန်ကာလဘောင်အတွင်းမှာ တုံ့ပြန်မှုတွေကိုသင်ရရှိပါရဲ့လား။
မိမိအလုပ်တာဝန်ကို ကျွမ်းကျင်ခြင်း . . .
အခုအချိန်ဟာ Emoji တွေ ဖောဖောသီသီ သုံးနေတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အလျောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုဟာ ကိန်းကြီးခန်းကြီး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၀န်ထမ်းရှာဖွေစည်းရုံးသူ၊ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ထမ်းငှားရမ်း ရေးမန်နေဂျာဆီက ပေါ့ပါးတဲ့ အီးမေးလ်ဝင်လာရင် သင်မအံ့သြပါနဲ့။ ဒါဟာသင့်ကို ပညာသည်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံတယ်လို့ သင်မှတ်ယူလိုက်ပါ။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို သင့်မန်နေဂျာ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ် မှန်းဆကြည့်ခြင်းက အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ကို သူစကားပြောပုံဆိုပုံအပေါ် သင်ကျေနပ်လက်ခံနိုင်ပါ့မလား။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း . . .
အလုပ်လျှောက်လွှာတွေ ခေါ်ယူရာမှာ အလိုအလျောက် ရေးပြီးသား အီးမေးလ်တွေ ဖြန့်ချိပေးပို့တာဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုပါ။ သင့်ရဲ့ ပထမဆုံး လျှောက်လွှာတင်ကတည်းက သင်ဒါကိုသိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၀န်ထမ်းရှာဖွေစည်းရုံးသူ၊ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ထမ်းခန့်အပ်ရေးမန်နေဂျာနဲ့ သင်တို့နှစ်ဦးကြား အဆက်အသွယ်နည်းနည်းပိုရပြီဆိုတာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်မှု အနည်းငယ်ကို သင်မျှော်လင့်တာဟာ ဆီလျော်ပါတယ်။ သင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်း မခံရတဲ့အခါ အဲဒါပိုမှန်ပါတယ်။ ''ငါ့ကို အလုပ်မပေးချင်မှတော့ ငါကလည်း သူတို့ဆီမှာ မလုပ်ချင်ပါဘူး''လို့ သင်တွေးချင်တွေးမိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အပယ်ခံရခြင်းဟာ အမြဲတမ်း ကိစ္စမပြတ်သေးပါဘူး။ တစ်ခါတလေ အလုပ်တစ်ခု၊ ဒါမှမဟုတ် ရာထူးတစ်ခုအတွက် သင်အပယ်ခံရပေမဲ့ တခြားအလုပ်/ရာထူးနဲ့ သင်ဟာသင့်တော်တယ်လို့ကုမ္ပဏီက ယူဆကောင်းယူဆလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီက ငှားရမ်းခန့်အပ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ အဆင်မပြေလို့ ဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ သင့်ကို ခေါ်ခန့်ချင် ခန့်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အပယ်ခံရခြင်းက ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးတွေအကြောင်း အများကြီးပြသပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီက လူတစ်ဦးနဲ့ သင်ဆက်ဆံမှုရရှိထားရင် သင်နဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ဖို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြုဖို့ သူအချိန်ယူသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်ကို ငြင်းပယ်ထားခဲ့ရင်ပေါ့။
၃။ အင်တာဗျူးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို အကဲခတ်ပါ။
အလုပ်အင်တာဗျူးဖြေဖို့သွားတဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာနိုင်မယ့်သူ တွေကို အကဲခတ်ခွင့်ရပါတယ်။ ရုံးရဲ့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အငွေ့အသက်တို့ကို အကဲခတ်ရုံမကဘဲ အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ကုမ္ပဏီက ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်ပါ။
သင်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတာ ကြိုသိပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီကုမ္ပဏီမှ သင့်အဆက်အသွယ်က အဲဒါကို လျှို့ဝှက်ထားသလား။ 'ဗျူး' သူတွေဟာ သူတို့ဘာကိုရှာနေမှန်း အတိအကျသိချင်မှသိလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က အချိန်စေ့တဲ့အထိ သင့်ကိုကျပန်းမေးခွန်းတွေမေးလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဗျူးသူတွေဟာ မတူတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် သင့်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်ဖို့ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ထားလို့ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် မိတ္တူပွား မေးခွန်းတွေ မမေးဘဲနေလိမ့်မယ်။ ဘာပဲပြောပြော သင့်ရဲ့အလုပ်ကို သတ်မှတ်ပြီး ယေဘုယျမျှော်လင့်ချက်တွေ ထားဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီဟာ နဂိုကတည်းက စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားပုံမရပါဘူး။ သင်ဘာလုပ်နေမှန်း အပြည့်အ၀နားမလည်၊ စည်းစနစ်ကျနမှု အမြဲလိုလိုမရှိ၊ သင့်တော်တဲ့လူတွေ ငှားရမ်းရေးဦးစားမပေးတဲ့ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကြားမှာ သင်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
၄။ သင်အစမ်းသပ်ခံနေရသလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လည်း အစမ်းသပ်ခံကြရတာပဲ။
တကယ်လို့ သင့်ကိုစမ်းသပ်မှု ဒါမှမဟုတ် စီမံကိန်း တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်ခိုင်းရင် အဲဒီ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အာရုံစိုက်ပါ။ ပထမဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချက်က သင့်ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကို သင်တကယ်ကြိုက်ရဲ့လား။ သင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင် ဒီအလုပ်ဟာ သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်ကြောင်း သင်္ကေတပြတာပဲ။ ဒီအလုပ် လုပ်တဲ့အခါ သင့်ကို လုပ်ခိုင်းမယ့်ကိစ္စကို အဲဒါက ညွှန်ပြတာကြောင့် သင့်ကို ဒီအလုပ်တာဝန် တမင်ဆောင်ရွက်ခိုင်းတာ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ။
တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စဉ် ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ အကဲခတ်ပါ။ သင်က ရှင်းလင်းတင်ပြမှုပြုလုပ်နေတဲ့အခါ ဘယ်သူက မေးခွန်းမေးသလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူက စိုးရိမ်မကင်းတာတွေပြောသလဲ မှတ်ထားပါ။ တုံ့ပြန်ချက်ကို စာနဲ့ရေးပို့တာ သင်လက်ခံရရှိရင် အဲဒါဟာ ရှင်းလင်းပြီး လုပ်ကိုင်လို့ရနိုင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် ၀ိုးတိုးဝါးတားနဲ့ အထောက်အကူမပြုဘူးလား။ သင့်ကို မေးမြန်းတဲ့လူဆီမှာ သင်အလုပ်ဝင်လုပ်နေပြီလို့ စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးကို ပုံမှန်အားဖြင့် သင်လက်ခံရရှိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။
၅။ အဖြေတွေကို အာရုံစိုက်ပါ။ လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေက သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာတွေမျှဝေကြသလဲ။
ဒီအင်တာဗျူးတွေ အားလုံးနီးပါး ဖြေဆိုလို့ပြီးခါနီးလောက်မှ သင့်ဘက်က မေးခွန်းမေးခွင့်ရတာကို လက် လွှတ်မခံပါနဲ့။ သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စဉ်က ဦးစားပေးမှုတွေကို စာရင်းပြုစုပါ။ ဒါဟာ ပညာသည်ဆန်တဲ့ တိုးတက်မှုလား။ အလုပ်နဲ့ဘ၀ရဲ့ ဟန်ချက်လား။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်နေအိမ်မှာပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ မူဝါဒလား။ ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်ခုခုလား။ အဲဒါတွေကို မေးဖြစ်အောင်မေးပါ။ တချို့မေးသူတွေဟာ သူ့ကုမ္ပဏီအကြောင်း အကောင်းချည်းပြောဖို့ ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ''အပင်ပန်းခံလုပ်ပြီး အားရပါးရပျော်ဆိုတဲ့ ရုံးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမျိုးပြောလာတဲ့အခါ ''မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ကိစ္စ ပြောဆိုဆက်သွယ်တာ ဘယ်တုန်းက နောက်ဆုံးပါလဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့သလဲ''လို့ သင်က မေးလို့ရပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ''လူကြီးမင်း ဒီမှာအမှုထမ်းနေတဲ့ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီက ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲ'' ''နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးတဲ့ စိုးရိမ်မကင်းစရာကိစ္စတချို့က ဘာတွေလဲ''စတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ သင်မေးပါ။ ဘယ်နေရာမဆို အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေပေမယ့် သင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်မယ့် ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်း သင်သိမှတ်လေ့လာစရာရှိတာ လေ့လာဖို့ အခွင့်အရေးပါ။ အလုပ်လျှောက်ထားမှုဖြစ်စဉ်က ကုမ္ပဏီအတွက်ရော၊ သင့်အတွက်ပါ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ အဆင့်တစ်ဆင့်စီဟာ လက်ရှိအမှုထမ်းတွေ ဘယ်လိုပြောဆိုဆက်သွယ်၊ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး သူတို့အလုပ်ကို ဘယ်လို လုပ်ကိုင်ကြသလဲဆိုတာ သင်သိခွင့်ရမယ့် အဖိုးတန်သတင်းအချက်အလက်ပါ။ နောက်ပြီး တကယ်လို့ အဆင့်တစ်ခုခုမှာ သင်သက်သောင့်သက်သာ မဖြစ်စေတဲ့အရာ တစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိရင်တော့ ဒီကုမ္ပဏီဟာ သင်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးမဟုတ်ကြောင်း သင်္ကေတကောင်းပြတာပါပဲ။ အလုပ်ကို လက်ခံပြီးမှ သိရတာထက် အခုသိရတာက ပိုမကောင်းဘူးလား။